Dowladda Somaliya oo heshiis dhex-dhigtay Beelo Kudagaalamay Hiiraan | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladda Somaliya oo heshiis dhex-dhigtay Beelo Kudagaalamay Hiiraan
Dowladda Somaliya oo heshiis dhex-dhigtay Beelo Kudagaalamay Hiiraan
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda soomaaliya Janeraal Muqtaar Xuseen Afrax ayaa soo gaba-gabeeyay kulan dib-u heshiin iyo is Cafin ah oo uu qabtay laba beelood oo colaad dhawaan ku dhex-martay Magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan.
Qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka labada beelood, mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda & Maamulka Hir-Shabeelle & xubno kale ayaa qeyb ka ahaa kulamada, iyada oo ugu dambeyn lagu guuleystay in la heshiisiiyo labada Beelood.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda soomaaliya Janeraal Muqtaar Xuseen Afrax ayaa uga mahad celiya labada Beelood sida ay u aqbaleen in heshiis la kala dhex-dhigo.
Colaada u dhaxeysay labada beelood ee wada dega magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sababtay in aanooyin qabiil dad aan waxba galasban loo dilo, waxaana ugu dambeyn faragelisay Dowladda Soomaaliya.
Previous articleWadooyinka Muqdisho oo Maanta Markale xiran
Next articleAMISOM Waxaan ka shirnay sugida Amniga doorashooyinka Soomaaliya
Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika ayaa war kasoo saaray go’aankii golaha shacabka Barlamaanka federaalka Soomaaliya ay muddo kordhinta ugu sameeyen Madaxweyne Maxamed ...